Erling Haaland oo go’aan lama filaan ah kaga yaabsaday kooxaha Real Madrid iyo Barcelona - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
(Borussia) 13 Jan 2021. Xiddiga reer Norway iyo kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa ka nixiyay kooxaha ugu awooda badan Spain iyo guud ahaan Adduunka ee Real Madrid iyo Barcelona, kuwaasoo doonayay inay helaan saxiixiisa xagaaga soo socda.
Real Madrid ayaa si xoogan loola xiriirinayay mudadii ugu dambeysay raadinta saxiixa gooldhaliyaha reer Norway ee Erling Haaland, si uu u noqdo hubka ugu weyn ee garoonka Santiago Bernabeu, iyadoo ciyaaryahanka uu dhawaan soo galay bar-tilmaameedyada naadiga Barcelona.
Wargeyska “Bild” ee dalka Germany ayaa soo wariyay in Haaland uusan ka tagi doonin kooxda Borussia Dortmund, madaama uu go’aansaday inuu sii wado u ciyaaro Dortmund xilli ciyaareedka soo socda, sababa la xiriira inuu ku faraxsan yahay garoonka Signal Iduna Park.
Tani waxay imaaneysaa saacado un kaddib markii saxaafada Catalonia ay sheegtay in Mino Raiola, oo ah wakiilka Erling Haaland uu doonayo in xiddigan uu u wareejiyo garoonka Camp Nou wax walba ay ku qaadato waqtiga soo socda.
Wargayska “Bild” ee dalka Germany ayaa xaqiijiyay in uu xiddigan aad ugu faraxsanyahay Borussia Dortmund, xilli aysan kooxda la kulmin wax cadaadis ah ee ku qasbi kara inay lumiso adeegiisa xilli hore.